သူမတို့ရဲ့ ချစ်သူသက်တမ်း (၈) လပြည့်တဲ့နေ့လေးမှာ ချစ်သူလေးကို ချစ်စကားလေးနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလာတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ – Cele Top Stars
သူမတို့ရဲ့ ချစ်သူသက်တမ်း (၈) လပြည့်တဲ့နေ့လေးမှာ ချစ်သူလေးကို ချစ်စကားလေးနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလာတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
January 17, 2021 By admin2Celebrity
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် အေသင်ချိုဆွေကေ တာ့ အနုပညာအလုပ်တွေမှာ အောင်မြင်မှုရရှိထားရုံသာမက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေး Ivy ရဲ့ မေမေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အေသင်ချိုဆွေက ပထမအကြိမ်အချစ်ရေးမှာ ကံမကောင်းခဲ့ပေမယ့် အခုဆိုရင် သူမကို အရမ်းချစ်ပြီး ဂရုစိုက်တဲ့ အပြင် သမီးလေး Ivy အပေါ်မှာလည်း မေတ္တာတွေအပြည့်ပေးနိုင်တဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က ဇန်နဝါရီလ (၁၆) ရက်နေ့မှာတော့ အေသင်ချိုဆွေတို့ ချစ်သူနှစ်ယောက်က ချစ်သူသက်တမ်း (၈) လတိတိပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အေသင် ချိုဆွေက Anniversary နေ့လေးမှာ ချစ်သူကို ချစ်စကားတွေ အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ်။
“Live လွှင့်နေရလို့ ခုမှ Ro ရတယ်..ဟီး သူကတော့ အိပ်သွားပြီ။ ငါတို့ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတယ်။ စကားတွေပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ မင်းကိုငါ စိတ်ဝင်စား လာတယ်။ လတွေ တစ်လပြီး တစ်လကြာသွားချိန်မှာတော့ ငါမင်းကို ပိုပိုပြီး စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပြီး မင်းကိုချစ်မိသွားတယ်.. ဒါက ငါဘယ်တော့မှ ဖျောက်ပျက်ပစ်မှာမဟုတ်တဲ့ အကျင့်လေးတစ်ခုပေါ့.. Happy 8th monthsary, coco Love you so much.. လစဉ်လတိုင်းရဲ့ ၁၆ ရက်နေ့က ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အမှတ်တရနေ့လေးပဲ။ အခုထိ သူလဲမမေ့ဘူး။ ကျွန်မလဲ မမေ့ဘူး။ ကျွန်မတို့ သားမိ၂ယောက်စလုံးကို တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်ပေးတဲ့တအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကိုကို.. Love you so much” ဆိုပြီး ပြောလာ ပါတယ်။
အေသင်ချိုဆွေတို့ ချစ်သူနှစ်ယောက်ကတော့ တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ အနေဝေးပေမယ့် ခိုင်မြဲတဲ့ သံယောဇဉ်တွေနဲ့ အချစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့တာ အခုဆိုရင် (၈) လတောင် ရှိလာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အေသင်တို့ချစ်သူနှစ်ဦး အခုလိုပဲ အမြဲထာဝရပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။
Source: Athen Cho Swe’s fb
ခဈြပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ၊ အဆိုတျော အသေငျခြိုဆှကေေ တာ့ အနုပညာအလုပျတှမှော အောငျမွငျမှုရရှိထားရုံသာမက ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးလေး Ivy ရဲ့ မမေလေညျး ဖွဈပါတယျ။ အသေငျခြိုဆှကေ ပထမအကွိမျအခဈြရေးမှာ ကံမကောငျးခဲ့ပမေယျ့ အခုဆိုရငျ သူမကို အရမျးခဈြပွီး ဂရုစိုကျတဲ့ အပွငျ သမီးလေး Ivy အပျေါမှာလညျး မတ်ေတာတှအေပွညျ့ပေးနိုငျတဲ့ ခဈြသူတဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ မနကေ့ ဇနျနဝါရီလ (၁၆) ရကျနမှေ့ာတော့ အသေငျခြိုဆှတေို့ ခဈြသူနှဈယောကျက ခဈြသူသကျတမျး (၈) လတိတိပွညျ့ခဲ့ပွီဖွဈပွီး အသေငျ ခြိုဆှကေ Anniversary နလေ့ေးမှာ ခဈြသူကို ခဈြစကားတှေ အခုလိုပဲ ပွောလာပါတယျ။
“Live လှငျ့နရေလို့ ခုမှ Ro ရတယျ..ဟီး သူကတော့ အိပျသှားပွီ။ ငါတို့ဆုံတှခေဲ့ကွတယျ။ စကားတှပွေောဖွဈခဲ့ကွတယျ။ ပွီးတော့ မငျးကိုငါ စိတျဝငျစား လာတယျ။ လတှေ တဈလပွီး တဈလကွာသှားခြိနျမှာတော့ ငါမငျးကို ပိုပိုပွီး စိတျဝငျစားလာခဲ့ပွီး မငျးကိုခဈြမိသှားတယျ.. ဒါက ငါဘယျတော့မှ ဖြောကျပကျြပဈမှာမဟုတျတဲ့ အကငျြ့လေးတဈခုပေါ့.. Happy 8th monthsary, coco Love you so much.. လစဉျလတိုငျးရဲ့ ၁၆ ရကျနကေ့ ကြှနျမတို့နှဈယောကျရဲ့ အမှတျတရနလေ့ေးပဲ။ အခုထိ သူလဲမမဘေူ့း။ ကြှနျမလဲ မမဘေူ့း။ ကြှနျမတို့ သားမိ၂ယောကျစလုံးကို တနျဖိုးထားပွီး ခဈြပေးတဲ့တအတှကျ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ ကိုကို.. Love you so much” ဆိုပွီး ပွောလာ ပါတယျ။
အသေငျခြိုဆှတေို့ ခဈြသူနှဈယောကျကတော့ တဈယောကျတဈနရောစီ အနဝေေးပမေယျ့ ခိုငျမွဲတဲ့ သံယောဇဉျတှနေဲ့ အခဈြတဈခုကို တညျဆောကျခဲ့တာ အခုဆိုရငျ (၈) လတောငျ ရှိလာပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ အသေငျတို့ခဈြသူနှဈဦး အခုလိုပဲ အမွဲထာဝရပြျောရှငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ခဈြပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါ တယျနျော။
Source: ခခ’s fb
နင်လမ်းတွေ့ခဲ့ရင်” ဆိုတဲ့ အသည်းကွဲသီချင်းလေးနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေးကို ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလာခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
နိုင်ငံတကာမှာ နာမည်ကြီးလာပြီး သတင်းစာတွေအထိပါ ဖော်ပြခံနေရတဲ့ ချစ်သူရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်ယူနေတဲ့ ပိုင်တံခွန် ချစ်သူကောင်မလေး